Ukpa Peptide Powder - Emeputa Factory
Ukpa Peptide ntụ ntụ
Ukpa peptide ntụ ntụ bụ ukpa obere peptide nke bara ọgaranya na 18 iche iche nke amino asịd na dị iche iche mineral site na iji ukpa kuki dị ka akụrụngwa na ala-okpomọkụ mgbagwoju enzymatic hydrolysis na ndị ọzọ na multi-nzọụkwụ biotechnology.
Ukpa Peptide Powder video
Ukpa Peptide Powder nkọwa
Product Name Ukpa Peptide ntụ ntụ
Agba Osisi edo edo ma obu odo odo
Gịnị bụ ukpa Peptide ntụ ntụ?
Mbelata mkpụrụ ndụ nke ukpa peptide ukpa bụ ihe na-erughị 1000u, na ọnụọgụ protein hydrolyzate nwere ike iru 90% ， nke dị mfe na-emetụta ahụ mmadụ. Ọzọkwa, ọ nwere ezigbo mmiri solubility, emulsification na ndu eme.
Gịnị bụ uru nke ukpa Peptide ntụ ntụ?
Millet oligo Mee ka omumu na ikike ncheta di
Ukpa peptide ntụ ntụ nwere ike ime ụbụrụ akwara ụbụrụ ụbụrụ ike, kwalite ụbụrụ anụ ahụ metabolism, weghachite ụbụrụ cell ọrụ, na n'ụzọ dị irè melite ụbụrụ learing na ebe nchekwa.
Belata ọbara mgbali
Ukpa peptide ntụ ntụ nwere ike ime ka ọnụego ACE dị na vivo, belata nrụpụta nke angiotensin ll, si otú a na-enweta mmetụta nke iweda ọbara mgbali.
Mgbochi ọrịa Alzheimer
Ukpa peptide ntụ ntụ nwere neuroprotective na antioxidant Njirimara nke nwere ike n'ụzọ dị irè scavenge free radicals, melite antioxidant enzyme ọrụ, mezie mkpali ihe. Ọ bụ ihe dị nchebe ma baa uru iji gbochie ma gwọọ ọrịa Alzheimer.
Ukpa peptide ntụ ntụ nwere mmetụta antibacterial siri ike nke nwere ike igbochi ọnụọgụ nke nje ndị na-emerụ ahụ ma chebe ahụ mmadụ site na nchịkwa ndị na-emerụ ahụ. N'otu oge ahụ, peptide ukpa nwere ike ime ka ikike phagocytic nke mkpụrụ ndụ phagocytic dịkwuo elu ma kpochapụ mkpụrụ ndụ apoptotic, ihe mkpofu metabolic na mkpụrụ ndụ nje na-emerụ ahụ.
Experimenta / Study of Walnut wepụ na vingmụta Mmụta na na na ebe nchekwa na ụmụ oke
Enzymatic Hydrolysis nke Ukpa Protein Kwadebe ACE Inhibitory Peptides na HaFunctional Njirimara.
Ihe omumu banyere ihe ogwu nke walnut peptide banyere ihe omuma nke ihe omuma nke oma na vivo na vir.
Ọrụ Antibacterial nke Ukpa Hydroly-sate.
Ọkụkọ Gizzard-Membrane Oligopeptide ntụ ntụ